Torolàlana teknika |
Masinina mameno zava-pisotro angovo
Tsipika milina famenoana ranom-boankazo PET
Masinina famenoana alikaola divay
Masinina famenoana alikaola tavoahangy fitaratra
Milina Flling Machine
Andalana milina famenoana menaka ilaina
10ml Masinina mameno ranon-javatra mameno maso
Masinina mameno toaka
Milina famonoana pilina, kapsily ary takelaka
Machine Tube Famenoana tombo-kase
Masinina mameno tavoahangy fanosotra
Masinina mameno poloney
Auto Line Sanitizer mameno milina
Masinina fanidiana Linear mandeha ho azy
Masinina Loader Cap automatique
Masinina fametahana lakaoly mangatsiaka
Masinina fametahana lakaoly mirehitra mafana
Mihena ny marika fanoratana tanana
Masinina fonosana sachet amin'ny rano
Milk / ranom-boankazo / milina fanangonana sachet Liquid hafa
Masinina fonosana saosy / apetaka
Masinina fonosana tsaramaso / voanjo / granules
Masinina fonosana dite
Masinina famenoana Juice Sachet mameno
Masinina fonosana marindrano
Inona no tokony hiomananao amin'ny ozinina fandefasana loko vaovao?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-09-22
Mpanjifa maro izay te hiditra amin'ny indostrian'ny famokarana loko famafazana te hahalala izay fiomanana tokony hatao alohan'ny famokarana. Ny lahatsoratra manaraka dia hampahafantatra anao amin'ny antsipiriany avy amin'ny lafiny telo amin'ny fitaovana, tontolo iainana ary fitaovana. Raha vao manomboka ianao dia mety hanampy anao ity lahatsoratra ity. ...
Inona no atao hoe milina fanaovana kaody? Firy ny safidy anananao amin'ny fampidirana mpanonta ny tsipika famenoana nofenoinao?
Inona no atao hoe Coder? Mpanjifa maro no nametraka io fanontaniana io taorian'ny nahazoana ny teny nalaina tamin'ny milina fanoratana sticker. Ny coder dia mpanonta tsotra indrindra ho an'ny marika. Ity lahatsoratra ity dia hampahafantatra anao mpanonta mahazatra marobe amin'ny tsipika famokarana. 1, Machine Coder / Coding Ny milina fanaovana kaody tsotra indrindra dia mpiara-miasa ...
Inona no fiantraikany amin'ny androm-piainan'ny milina?
avy amin'ny admin tamin'ny 21-08-09
1. Voalohany indrindra: Ny kalitaon'ny masinina. Ny mpanamboatra sy ny milina isan-karazany dia mety mampiasa singa elektronika misy marika sy fanamafisana samihafa. Ny masinina dia misy rafitra maro, ary ny mekanisma tsirairay dia mifamatotra amin'ny kojakoja samihafa. Ny avo ny ...
niresaka sy niorina-toerana
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-12-16
tsy mitovy izy eo amin'ny karazana fehin-kibo sy ny karazan-toerana voafetra ho an'ny fametahana tavoahangy boribory Matetika, ny mpividy dia misavoritaka amin'ny milina fanoratana tavoahangy boribory miaraka amin'ny fitaovana miresaka sy miorina. Afaka manome marika ny tavoahangy boribory izy ireo. Inona avy ireo fahasamihafana ireo? Ahoana no ahafahantsika misafidy milina mety? Andao isika intr ...